[Spaoro ] 31 Jolay, 2008 11:53
[Ankapobeny ] 26 Jolay, 2008 08:42
Mampatahotra ny lozam-pifamoivoizana!
Kamiao be anakiroa omaly no nanapaka ny lalana RN4 vokatry ny loza naterakin'ny tsy fitandremana. Voalaza mantsy fa nifanenjika ireto kamiao anakiroa ireto ka izao niteraka fitohanana sy lalana tapaka izao soa ihany aloha fa tsy nisy ny aina nafoy fa ny fahavoazana ara materialy no betsaka! tao ny rava trano ny kamioa moa potika tanteraka ny Kaontenera nentina nidoboka sy nitsivalana teo @ arabe. Ny Kamiao iray moa dia nidofotra tetsy Antanety Ambohimanarina ary nifaoka trano anakitelo ny faharoa kosa dia teo @ ilay fidinana Ambodimita ary nifatratra tany @ tranon'olona ihany koa! soa fa niandry faty ireto tompotrano ka tsy nisy tao fa raha tsy izay angamba dia faty nikararana no hita.
Nisy olona maty hita natsingevan'ny rano indray tetsy @ ilay lakan-drano etsy Andraharo mbola eny @ iny faritra Ambohimanarina iny ihany no niseho ny tantara. Vehivavy lehibe ilay izy ary mbola teny ankodiny daholo ny fitafiny rehetra. Ity rano ity moa dia ahitana ohatr'izao foana rehefa miditra ny rano. Mbola misitery ny antony nahafaty ity olona ity fa ny tena nampahonena dia ny tsy fikarakaran'ny Kaominina ny razana. Ireny Kamiao be mpitaona fako ireny mantsy no nakana ilay faty!!! ary onena daholo izay sendra nandalo sy nahita ity tranga ity omaly oe sanatria ve efa fatim-biby no dia atao ohatr'izao. Toy izao koa mantsy hono no nanaovana ireo enin-dahy maty teny Ivato herinandro lasa izay. Mba tokony jeren'ny tompon'andraikitra akaiky ihany ny ohatr'izao.
Efadahy mpikambana sy mpikarakara Rallye ao @ FMMSAM no indray maty tsy tra-drano tany Ilempona Antsirabe raha nisava ny lalana kasaina hanaovana ny fifaninana ao aorina kely ao. Rehefa ho avy moa ny loza tsy mba mampilaza. Dia bangana indray izany ny tontolon'ny fanatanjahatena. Vokatrin'ny fandehanana mafy moa no tena nahatonga ny loza ary tsy teny @ lalam-pirenena akory no nitranga fa tany @ route secondaire ary voalaza fa tsy tafiditra tao anaty tetezana ilay 4x4 netin'izy efadahy ka izay no tena nahatonga izao loza izao.
Hivadika lafim-baovao hafa kosa tanteraka aho aloha fa efa ho lava izany zavatra mampalahelo notataraiko teo izay. Dia ny lafin'ny toetrandro izany, diso fanantenana tanteraka mantsy ny olona mpanao vakansy any Toamasina ankehitriny fa tsy misy masoandro mihiratra mihitsy fa dia orabe mikija foana izay efa ho herin'andro izao. Ka asakasak'izay mbola te handeha any aloha.